Ogaden News Agency (ONA) – Idaacad lagaleeyahay Switzerland oo wareysi la yelatay maxamed (Banaanbaxi Belgium)
Idaacad lagaleeyahay Switzerland oo wareysi la yelatay maxamed (Banaanbaxi Belgium)
Posted by ONA Admin	/ June 25, 2012
Wargeyska Kantipark oo ah Radio wadanka Switzerland kaso baxa ayaa wareysi dheer oo Radio ah la yeeshay xubin kamid ah Ururka Dhalinyarada Ogadeniya ee OYSU. Mudane Maxamed oo dadiisu tahay hada 21 sanno ayaa isaga oo jira 11 sanno waxa uu kasoo qaxay dhulka Ogadeniya kadib markii waalidkiis ay ciidamada gumeysigu dileen. Maxamed waxa uu kamid yahay dhalinyarada faraha badan ee qoysaskooda dhibaatadu kasoo gaadhay gumeysiga.
hadaba wargeyska oo Maxamed ka wareysanaya Banaanbaxi weynaa ee ka dhacay wadanka Belgium isaga oo Cod ah waxaad ka dhageysan kartaa Bogga wargeyska Kantipark isaga oo cod ah. Hoosta guji.
<<wareysigi Maxamed uu kaga hadlay Dhulkisa Ogaden ka dhageyso halkan>>>
Wareysigan ayaa qeybo ah, qeybtana waa qeybti kowaad ee waraysiyadii ay qabteen Idaacadan Kanipark. Waxana laga dhageysan doona idaacadaas qeybo kale oo kamid ah wareysiyada la xidhiidha Qaxootiga Ogadeniya ee kusugan wadanka Switzerladn ee kasoo nabdgalay xasuuqa Ogadeniya magan galyadana ku jooga wadankaas Switzerland.
Maxamed waxa uu kamid yahay dadka ree Ogadeniya ee ku nool wadanka Switzerland ee codkiisa ku caawinaya shacabka Ogadneiya ee gumeysiga ku hoos jira. waxa uuna ka qeyb galay banaanbaxii weynaa ee ka dhacay magalada Brussels ee wadnaka Belgium. Halkaas oo jaaliyado badan oo Ogadneiya ahi kukulmeen si ay ugu mudaharadan guriga Baarlamanka EU, iyaga oo ka codsaday in laga joojiyo mucwamada Wadanka Ethiopia ama waxa lasiiyo dabagal rasmi ah lagu sameyo iyo qiimeyn meesha ay ku baxdo iyo waxa loo isticmaalo. Waayo waxa Kaligi taliye Zenawi u isticmala lacagaha uu EU ka helo arrimo siyasadeed oo ay ugu weyntahay xasuuqa Ogadeniya uu ka geysto.